Klopp oo hal arrin ka codsaday Atletico Madrid ka hor kulanka ay isku wajahayaan Champions League – Gool FM
(Liverpool) 18 Jan 2020, Kooxda difaacaneysa koobka Champions League ayaa dib ugu soo laabaneysa bartamaha bisha Febraayo tartankan, maadaama ay qeyb ka tahay kooxaha ka qeyb galaya kulamada laga ciyaari doono wareega 16-ka, waxaana wareegan lagu daawan doonaa dhowr ciyaarood waaweyn, gaar ahaan wiilasha tababare Jurgen Klopp ayaa waxay wajihi doonaan naadiga reer Spain ee Atletico Madrid.
Haddaba macalinka reer Germany iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaan sugin inta laga gaarayo kulankan si uu kaga hadlo, wuxuuna ka codsaday Atletico Madrid inaysan la soo wareegin weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee bishan Janaayo.
Magaca Edinson Cavani ayaa si xoogan lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda reer Spain ee Atletico Madrid, si uu ugu noqdo badelka Antoine Griezmann oo ka dhaqaaqay xagaagii lasoo dhaafay iyo dhaawaca soo gaaray Diego Costa.
Yeelkeede, Klopp ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay habeen dambe la ciyari doonaan Man United, wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirinaya Edinson Cavani inuu ku biirayo Atletico Madrid.
Jurgen Klopp ayaa hadaladii uu ka sheegay shirkan Jaraa’id waxaa ka mid ahaa:
“Álvaro Morata iyo João Félix waa qatar ku filan, Diego Costa waxaan u maleynayaa inuu ku socdo wadadii uu dib ugu soo laaban lahaa”.
“Atletico Madrid waa koox fiican in ku filan, waxaana rajeynayaa inaysan la soo saxiixan doonin Edinson Cavani”.
“Waxaa jirta bil dhan ee ka harsan kulankan, wax walbana wey isbedelayaan”.